SundaySermons.online: စစ်မှန်သော ချီးမွမ်းခြင်း
ဒါက ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး တွေ့ကြုံခဲ့ရင် ဘုရားသခင်ကို ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော် တို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကနေ ထွက်လာမဲ့ စကားတွေကတော့ - ဘုရားသခင်. . . ကျွန်တော် ကိုယ်တော့် စကားနာခံခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော် အရိုက်ခံရတာလဲ၊ မမှန်ဘဲနဲ့ ဘာကြောင့် အစွပ်စွဲခံရတာလဲ။ ကိုယ်တော် ဘာကြောင့် ဒီမှာ ဒီလိုမျိုး တွေ့ကြုံ ခံစားစေရတာလဲ . . . ဆိုတဲ့ မေးခွန်း တွေဘဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ပေါလုနဲ့ သိလ တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကြည့်ရအောင်။
ရှင်ပေါလုက အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ့် အတွက်ဘဲ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။“ဝေး. . ဟေး ထောင်တံခါးတွေ ပွင့်သွားပြီ ထောင်ထဲက ထွက်ပြေးကြရအောင်ဟေ့ . .''။ အဲဒီလို မပြော ခဲ့ပါဘူး။ ပေါလုဟာ ရောမနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ပညာတတ် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ သူက ရောမ ဥပဒေအရ ထောင်သားတွေ လွတ်သွားရင် ထောင်မှုး ခံရမယ့် နောက် ဆက်တွဲ အကျိုးဆက် ကိုလည်း သိနားလည်တဲ့ သူဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ ထောင်မှုး အပေါ် အာရုံစိုက် ထား တယ်။ ထောင်မှုးကို ပြောလိုက်တဲ့ ပေါလု ရဲ့ အဖြေစကားဟာ “ငါ ဒီထောင်ထဲမှာ ကြာ ကြာဆက်နေပါ့မယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက် ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေါလုအတွက် အဲ့ဒီအချိန်မှာ အဓိက အရေးကြီးဆုံးက ထောင်မှုး ရဲ့ အသက်ပါဘဲ။ ဒါက ချီးမွမ်းခြင်း ရဲ့ တန်ခိုးပါဘဲ။ ချီးမွမ်းခြင်းက ကိုယ့်အတွက် စဉ်းစားမှုတွေကနေ သူများတွေ အတွက် ဆင် ခြင်တတ်သော နှလုံးသားကို ပြောင်းလဲစေပါ တယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ကို ချီးမွမ်းကိုးကွယ် တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ သူဖြစ်တယ်။ ''ကျွန်တော်တို့က ကိုယ် တော်ကိုတော့ ချစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြား သူတွေကိုတော့ မချစ်နိုင်ပါဘူး'' ဒီလိုပြောလို့ မရပါဘူး။
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 3:32 AM